10 SEO Atụmatụ maka WordPress weebụsaịtị si Semalt
Ụlọ ọrụ ọchụchọ naanị na-eche banyere ụfọdụ "ihe ọgbara ọhụrụ" dị ka mkpado elu, faịlụ aha,na isiokwu. Ịghọta otú "ihe ndị a" eji arụ ọrụ nwere ike isi mee ka azụmahịa ahụ nwee ọganihu, mgbe ileghara ha anya nwere ike ịrụ ọrụ megide gị.
Artem Abgarian, Onye Nlekọta Ọrụ Ndị Ahịa nke Ọkachamara ,enye ndụmọdụ bara uru banyere otu esi achọpụta na Ịntanetị na weebụsaịtị WordPress gị.
Ọdịnaya bụ njikarịcha kacha mma. Njikarịcha dị irè ma ọ bụrụ na akwado yaelu site na iche iche na mma ọdịnaya - imac 27 touch screen overlay kit. Ederede na okwu dị iche iche na-egosipụta isiokwu nke post. Ọdịnaya kwesịrị ilekwasị anya na onye ọbịa ahụ ma ọ bụghị ọchụchọ ahụengines. Ọ dịkwa mkpa ka ọ bụrụ ihe a pụrụ ịgụta ọnụ na nghọta.
Ịgbanwere njikọ azụ. Ọ bụrụ na a gbanwere mgbanwe a n'ụzọ kwesịrị ekwesị na njikọ sitere nandị dị mkpa, weebụsaịtị ndị dị elu na-enye otu ọdịnaya gị, ọ ga-enye gị nnukwu uru.
Inye aha kwesịrị ekwesị na faịlụ ihe oyiyi. Ịdebe ihe oyiyi kachasị mkpa naederede dị na post, Google na-egosiputa ihe niile metụtara ha dabere na ajụjụ a mere. Ọ bụ ihe amamihe dị na iji isiokwu nke a kapịrị ọnụN'okpuru foto a, na-echeta iji ogo tag na mkpado aha iji mee ka nhụta na njikarịcha.
Short permalinks nke gunyere okwu. Ihe omuma permalinks bu ihe bara uruahia. Na mkpuru okwu, naanị okwu anọ mbụ dị mkpa, dịka Google nweruru okwu niile na-eso..
Nyocha search achọpụtara akụrụngwa. Ụfọdụ ebe nrụọrụ weebụ na-eji oke koodu rụọ ọrụnhazi na imewe. Google ga-esi na koodu ntinye iji weputa ọdịnaya dị mkpa. Ihe mgbagwoju anya ka koodu bu, ihe na-adighiọdịnaya, na njupụta oke okwu wepụtara. Ịrụ ọrụ bụ ihe dị mkpa mgbe ị na-ekpebi nchịkọta ọchụchọ, nke mere ihe mere ngwa ngwa na-eme ka isiokwu dị mmaụlọ ọrụ Google nke ụlọ ahịa
Mepụta ntọala na usoro XML. Ọ dị mfe ịrụ ọrụ a mgbe ị na-eji ya eme iheIhe ntanetị Google XML Sitemaps. Ihe ndị ọzọ ị ga - eji na - agụnye Njikwa Ntanetị na Webmaster Central.
Gosi ihe omuma ma obu isiokwu. Igodo h1-h6 enyere akaedemede, ndepụta okwu, ma ọ bụ ozi dị mkpa na otu isiokwu.
posts netwọk mmekọrịta. Ịdefe na netwọk mmekọrịta dị mma maka nlekọta SEO.Dị ka ọ na-akwalite ụfọdụ uru maka SEO, posts kwesịrị ịdịgasị iche na ọ bụghị naanị banyere azụmahịa. Ọ ga-enyere gị aka ịkwalite nkwurịta okwu dị ukwuun'etiti gị na ndị na-ege gị ntị.
Ịkwụsị site na nwa ojii SEO omume. Ọ fọrọ nke nta ka ọ ghara ikwe omume ịghọgharị Googlesite na iji okpu ojii ma ọ bụ mirror saịtị HTML, dị ka Google ga-emesị chọta ha ma weta ntaramahụhụ dị arọ.
Na-arụ ọrụ na ikpo okwu ziri ezi. Zere iji Flash dị ka ọ na-adịghị ahụ anya maka ọchụchọma tinye ya na WordPress.
SEO mere ka olu ma ọ bụ mma nke okporo ụzọ gaa na weebụsaịtị. Ngwongwo ọchụchọ na-enyere akaiji nweta nke a site na ịkwọ ụgbọala site na nsonaazụ ọchụchọ "eke" ma ọ bụ "enweghị ụgwọ". Ozizi nke a bụ na mbụ, ma ọ bụ saịtị dị eluegosi na nsụgharị nsonaazụ, ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị ọbịa ọ ga-enweta.